Tababare lagu eedaaynayo 100 denbi oo waaweeyn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nin tababare ah oo lagu tukunsan yahay in uu 100 denbi u geeystey caruur mudo dheer. Sawirle: Jessica Gow / SCANPIX / Kod 10170
Tababare lagu eedaaynayo 100 denbi oo waaweeyn
La daabacay onsdag 3 maj 2017 kl 11.37
Maanta waxa maxkamad ku taala Skåne la soo taagidoonaa nin lagu tukunsan yahay in uu geeystey tacadi ka dhan ah 12 wiil oo uu mudo 10 sano ah uu denbiyadan kula kacayey.
Ninkan oo ah tababare ayaa qirtay in uu sameeyey qaarka mid ah waxyaabaha lagu eedaynayo laakiin waxa uu ku doodayaa in aanu denbi gelin.
Bishii jeeniweri ayaa ninka la qabtay ka dib markaa qaar ka mid ah wiilashii tacadiyada loo geystey ay wargeliyeen booliska oo kadib qabtay ninkan, iyaga oo gurigiisana ka helay aflaan tusayaa qaarka mid ah denbiyadan. Maxkamadda maanta ayaa lagu soo bandhigay tuunbooyin, suumam iyo qalabo kale oo la sheegay in uu u adeegsaday denbiyadan. Wiilasha xadgudubka lagula kacay ayaa sheegay in ninkan hunguriga ka geliyey tuunbooyinka isaga oo ka xidhay neefsashada. Xoghaynta ayaa ku doodaysa in ninkan oo 41 jir ah geeystey 100 denbi oo 12 wiil uu ku la kacayey mudo dheer.
41 jirkani waa uu qirtay ii uu xidhxidhay wiilasha tuunbooyinkana hunguriga ka geliyey,laakiin waxa uu sheegay in uu wiilasha u tababarey in ay adeecaan oo ay noqdaan ciyaaryahano wanaagsan isaga oo intaa raaciyey in uu ogolaansho ka haystey. Ninkan ayaa sidoo kale lagu soo oogayaa in uu haysto aflaan badan oo muujineysa kufsi caruur loogeeysanayo.